I-GPS029W-i-OMG yokuGcina amanzi ngokuGcina abantwana-IziSombululo ze-OMG
Ngoku kuphela i-S$98 (iWaranti yeenyanga ezi-6)
* Ukufumana indawo ezininzi -I-GPS / AGPS / GSM / iWiFi.
* Ixesha langempela Ukuthetha Ukurekhoda nokuthumela umyalezo welizwi.
* Inombolo yentsapho -Ungacwangcisa amanani osapho ali-10 (utata / umama), inombolo ye-3 ye-SOS kunye nenombolo yokujonga eyi-1.
* Indawo yo khu seleko -Yenza indawo eMephini nge-APP, isilumkiso siya kwenzeka Nje ukuba abantwana bakho baphume kuMmandla.
* Fumana umlindi -Nika amandla lo msebenzi, iwotshi iyothusa kwaye ungayifumana ngokulula.
* Ukwenza abahlobo Iwotshi ezimbini ziyahlangana kunye zinokongeza nganye njengokuba unxibelelwano lunokufowuna kunye nokuncokola ngelizwi.
* Susa isilumkiso sesandla -Umlindo uya kuthumela umyalezo wokujonga inombolo xa iwotshi isusiwe.
* Yongeza ifowuni -Ungadibanisa esinye isixhobo apha kwaye ulawule izixhobo ezimbini ezahlukeneyo kwiakhawunti enye.
* Umzila wembali wembali -Ungaphinda enye indlela yomntwana wakho kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo.
* Ukumiswa kwendlela -Ungakhetha iindlela ezimbini ezahlukeneyo, imo yokonga umbane yenza ubomi bebhetri obude.imowudi yokulandela iya kuba nendawo yokulandela umkhondo ngakumbi kodwa ithathe amandla amaninzi.
* Iwoshi ye-alamu -I-3 alarm alarm clock ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo.
* Iveki yezwi Umlindo kufuneka usete inombolo yokujonga esweni emva kokuba unike umyalelo wokubeka esweni, cofa inombolo ebekwe esweni.
* Geo-fence -Ungacwangcisa i-Geofence yabantwana bakho, iya kuthumela ialam xa umntwana sele ephumile ngocingo.
* isicelo Cofa iqhosha lesicelo kwaye unokuseta igama lefowuni yakho, inombolo yosapho, utshintshe iphasiwedi njalo njalo kwimisebenzi.
* impilo -Ukubandakanya ukubalwa kwamanyathelo, isixa sokuzivocavoca, ezemidlalo uhambo.add inzwa ye-3D ngaphakathi kwewotshi, iya kubala amanyathelo okrelekrele ngelixa usebenza okanye usebenza.
* imivuzo-Thumela "ukuthanda" kubantwana ngokuziphatha kakuhle.
6556 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-4 Namhlanje